Real Madrid & Bayern Munich Oo Wacdaro Ka Dhigi Doono Suuqa Ciyaartoyga Ee Xagaaga, Juventus & Man United Oo Ciyaartooyo Isweydaarsan Doona Iyo PSG Oo Doorkeeda Qaadanaysa | Hohad News
Real Madrid & Bayern Munich Oo Wacdaro Ka Dhigi Doono Suuqa Ciyaartoyga Ee Xagaaga, Juventus & Man United Oo Ciyaartooyo Isweydaarsan Doona Iyo PSG Oo Doorkeeda Qaadanaysa
Suuqa ciyaaryahannada ee 2019/20, kooxda ugu horreysa ee dhaqdhaqaaqa ugu badan ka samaynaysa waxay noqon doontaa Bayern Munich oo madaxweynahaeeda Uli Hoeness uu shaaciyey inay si weyn iskugu diyaarinayaan inay maalgelin ku sameeyaan kooxdooda, si ay ugu soo celiyaan heerkeedii hore.
Bayern Munich waa kooxda kaliya ee madaxweynaheedu uu illaa hadda si dhab ah ugu dhawaaqay inay dibu-habayn ballaadhan iyo maalgelinba isku samaynayaan, balse waxa jira naadiyo kale oo iyagana la aaminsan yahay inay cudud-dhaqaale kusoo jiidan doonaan laacibiinta ay doonayaan, si ay uga soo kacaan halka hoose ee ay xili ciyaareedkan galeen.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa kooxaha la filayo inay lacagta badan suuqa geliyaan oo ay soo iibsadaan xiddigaha suurtogalka ah ee la heli karayo iyo sababaha ku kellifaya inay isbeddelka sameeyaan:
Bishii December ee tagtay, haleeyada kooxda reer Germany ee Franck Ribery iyo Argen Robben ayaa ku dhawaaqay inay ka tegi doonaan dhamaadka xili ciyaareedka oo ay soo afjari doonaan muddo toban sannadood ah oo ay u ciyaarayeen.
Isla markiiba Bayern waxay qaadday tallaabooyin muhiim ah, waxaanay 35 milyan oo Euro ka bixisay Benjamin Pavard, sidoo kalena waxay xiisaynaysaa halyeyga rukunka adag u ah Atletico Madrid ee Lucas Hernandez.
Waxa la aaminsan yahay in Bayern Munich ay suuqa gelin doonto lacag ka badan 200 milyan oo Euro oo ay ciyaartooyo cusub kusoo iibsan doonto.
Xili ciyaareed musiibo oo kale ah ayaa soo maray Real Madrid, welina way kusii jiri doontaa illaa inta uu ka dhamaanayo.
Waxa isbeddelay saddex tababare dhawr bilood gudahood, waxaana ugu dambayn uu Florentino Perez shaqada kusoo celiyey Zinedine Zidane oo uu ku qanciyey inuu dibu-dhis ugu samayn doono kooxda marka uu suuqu furmo.
Tegistii Cristiano Ronaldo ayaa isbeddel weyn ku samaysay Real Madrid, waxaanay waayeen dilaagii goolasha ee guusha u horseedi jiray iyo kontonkii gool ee xili ciyaareed kasta uu dahlin jiray, balse hadda waxa uu Zidane haystaa ballan ah in ciyaartoy u dhiga loo keeni doono.
Maalmo kaddib soo laabashadii Zinedine Zidane, Real Madrid waxay ku dhawaaqday heshiis ku kacaya 50 Milyan oo Euro oo ay la saxeexatay difaaca FC Porto ee Eder Militao oo u dhashay waddanka Brazil, waxase la sugayaa oo Los Blancos uu shiishku u saaran yahay xiddigaha Paul Pogba, Christian Eriksen, Eden Hazard, Mauro Icardi, Harry Kane, Kylian Mbappe iyo Neymar, kuwaas oo dhamaantood lala xidhiidhinayo Real Madrid.
Kaddib markii laga cidhib-tiray tartanka Champions League oo maraya wareeggii 16aad, maamulka kooxdu waxay fahmeen in weli ay u baahan yihiin isbeddel oo aanay gaadhin heerkii ay kaga dhex muuqan lahaayeen tartamada Yurub.
Hore waxay u haysatay Neymar iyo Mbappe oo afkeeda hore ee weerarka hoggaaminayey, balse waxay u baahan yihiin sidii ay iyagana ku sii haysan lahaayeen ee ay ugu qancin lahaayeen in aanay dheg u dhigin xiisaha uga imanaya kooxaha kale iyo weliba in heshiiska xayaysiinta cusub ee ay qaadatay PSG ay qayb ka mid ah lacagta u isticmaasho ciyaaryahanno cusub oo ay soo iibsato, si xili ciyaareedka dambe iyadoo ka awood badan sideedii hore ay u timaaddo tartanka Champions League oo ah riyada Nasser Al-Khelaifi.
Manchester United iyo Juventus
Labada kooxoodba waxay u baahan yihiin isbeddel, Paulo Dybala ayaana u muuqda inuu noqon doono furaha xidhiidh dhex mara labada kooxood.
Red Devils ayaa la sheegayaa inay doonayso inay lacag badan oo dibu-habayn ah suuqa geliso ayna kasoo qaadato ciyaartooyo ay dib iskugu dhisto, waxaana ugu horreynaya Dybala oo la fahamsan yahay inay ka bixin doonnto 120 milyan oo Euro, balse Juventus ayaa iyaduna doonaysa in heshiiska uu qayb ka noqdo Romelu Lukaku si uu xili ciyaareedka dambe uga caawiyo inay dardar hor leh lasoo galaan Champions League isagoo ka garab ciyaaraya Christiano Ronaldo.